Curiosities nke Rome | Njem akụkọ
Curiosities nke Rome
Mariela Carril | | Rome
Obi abụọ adịghị ya na otu n'ime obodo ndị kasị ewu ewu n'ụwa bụ Rom. Anyị nwere ike inye ya ọtụtụ adjectives ndị ọzọ, n'ezie: dị mkpa, omenala, na-akpali, akụkọ ihe mere eme, na-adọrọ mmasị… Ndepụta ahụ dị ogologo.
Nkọwa okwu ahụ bụ "ịchọ ịmata ihe" metụtakwara gị? O nwere ike ịbụ, dị ka obodo oge ochie ọ bụla nwere okwu ụfọdụ pụtara ìhè. Taa, curiosities nke Rome
2 Curiosities nke Rome
Obodo E hiwere ya na Eprel 21, 753 BC. Ọ bụ n'ime ọdịda anyanwụ Central Italy, na Lazio mpaghara, na bụ isi obodo nke obodo. Ọ bụ kemgbe 1871, na tupu Turin na Florence bụ. Ọ bụkwa obodo na ọnụ ọgụgụ kasị ukwuu nke ndị bi, na-eru a bi na Mmadụ nde 2.8 na 2020.
Rome dị nso n'Oké Osimiri Tyrrhenian na osimiri ya bụ Ostia. Ị nwere ike iji ụgbọ ala ma ọ bụ metro rute n'akụkụ osimiri a site n'ebe ọ bụla n'obodo ahụ n'ime nanị ọkara elekere. Dị egwu! UNESCO ekwupụtala na etiti obodo ahụ Ihe Nketa Worldwa na 1980 na ụfọdụ ebe agbakwunyere n'ime afọ iri sochirinụ.
Obodo e wuru na mbụ n’elu ugwu asaa, ndị Aventino, Quirinale, Viminale, Esquilino, Celio, Campidoglio na Palatino. Ụfọdụ n'ime ha nwere ebe kacha ewu ewu na Rom.
Gịnị bụ akara Rome? anụ ọhịa wolf na enyemaka a ma ọ bụ ihe oyiyi a nwere ike ịhụ obodo niile, dịka ọmụmaatụ na Capitolini Museum na ọbụna n'òtù egwuregwu football obodo. Dị ka akụkọ ifo si kwuo, ọ bụ anụ ọhịa wolf a napụtara ụmụnna Romulus na Remus, onye bụbu onye malitere obodo ahụ.
Obodo nwekwara Ndị nsọ abụọ nke Ndị Kraịst: Saint Paul na Saint Peter. A na-eme mmemme ndị na-elekọta ndị nsọ na Julaị 29, bụ ezumike dị nso ebe a, na ụbọchị ejiri ejiji ochie nke Saint Peter dị na isi mmiri nke basilica homonymous. Ọ bụ nnukwu ụbọchị ịnọ n'isi obodo Italy n'ihi na enwere ọkụ na Castel Sant'Angelo.
N'ịbụ onye gosipụtara Rome n'ihu ọha, ugbu a bụ ihe efu banyere ya. Ọ bụ ezie na Rom bụ obodo ndị Rom oge ochie, nke bụ́ eziokwu bụ na a pụrụ ịtụle ya "obodo ụka". Ndị mmadụ na-ekwu otú ahụ enwere ihe dị ka ụlọ ụka 900 na mkpokọta…
Ọ bụghị chọọchị niile dị na Rom bụ ndị ọha na eze ma ọ bụ ndị a ma ama, ma ha dị ebe ahụ ma ọtụtụ mara mma nke ukwuu. Mgbe ị na-agagharị n'obodo, ị ga-ahụ ha na ndụmọdụ m bụ na ọ bụrụ na ha mepere emepe, lee anya. Ha dị nha na ụdị dị iche iche.
Dịka ọmụmaatụ, ụka gburugburu dị ụkọ mana enwere opekata mpe atọ ebe a: Pantheon, otu ụlọ nsọ Rome ochie a gbanwere ghọọ chọọchị, ndị Basilica nke Costanza, akụkụ nke mgbagwoju anya nke malitere n'oge Constantine Onye Ukwu, na Santo Stefano Rotondo, ọmarịcha ụlọ ụka ochie na ugwu Caelian.
Dị ka obodo ndị ọzọ dị na Europe, ma n'ụzọ pụrụ iche, a ghaghị icheta na Rom bụ obodo nke bi na ya kemgbe oge ochie. Nke ahụ na-eme otu n'ime njirimara Rome kpọmkwem ya agwakọta architecture ebe mkpọmkpọ ebe Rome na-ebikọ ọnụ na Middle Ages, Renaissance, art baroque, art deco, ihe owuwu fasist na nka nke oge a. Ha niile ọnụ.
Ọchịchọ ịmata ihe ọzọ nke Rome na-agbagharị gburugburu Kọlọsi. Colosseum bụ otu n'ime saịtị ndị a kacha eleta n'ụwa ma na-anabata ndị ọbịa nde isii kwa afọ. Enwere ndị na-azụta tiketi tupu oge eruo, mana enwebeghị m nsogbu ịzụrụ ha n'otu ụbọchị ahụ. A na-ere otu tiketi maka ebe nkiri atọ ma n'ụbọchị anwụ na-acha, ị na-eme ihe niile ọnụ.
N'aka nke ọzọ Rome nwere ụlọ ịsa ahụ ọkụ ochie kacha ibu n'ụwa. Anyị amaraworị na ndị Rom hụrụ bat ahụ n'anya, yabụ enwere ihe owuwu abụọ dị mkpa ebe a: nke Baths nke Caracalla na ụlọ ịsa ahụ nke Dioclesan, Nke kacha n'ụwa. Na mbụ m nọrọ a obi ụtọ ụtụtụ na n'ọnụ ụzọ m rie a nnọọ tọrọ ụtọ ice cream. Ana m akwado ya!
Ị maara na ọtụtụ n'ime Ebe ndị ewu ewu na Rome nwere mbinye aka nke otu onye na-ese ụkpụrụ ụlọ? Ọ bụ ezie na ọ bụ obodo nwere ọtụtụ narị afọ nke akụkọ ihe mere eme na ọtụtụ ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ, ndị na-ese ihe na ndị injinia emepụtala ya, enwere ike ịsị na kaadị ozi dị ugbu a bụ. Bernini. Bernini rụrụ ọrụ na Rome na narị afọ nke XNUMX na Piazza Navona ma ọ bụ Saint Peter's Square nwere mbinye aka ya.
La Piazza Navona Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na obodo na otu n'ime ndị kasị ama. Ọ bụ na mbụ ámá egwuregwu Rom na ụdị mbụ ya ka nwere ike ịhụ site n'elu, dịka ọmụmaatụ site na ala nke abụọ nke Palazzo Braschi. Iju mmiri juru ebe a ọbụna maka egwuregwu ọgbakọ, bụ́ nke na-eme mgbe nile n’agbata 1652 na 1865. E mechakwara megharịa ya. Ị nwere ike ịhụ usoro mgbanwe a na Museum nke Rome nke na-ele anya na square a ma ama.
Ihe ọzọ na-achọsi ike bụ nke ahụ Rome nwere ihe dị ka puku isi iyi abụọ na ọtụtụ ndị buru ibu na ndị ọzọ dị obere ma ha niile na-enye mmiri dị ọhụrụ na nke a na-aṅụ. Nke bụ eziokwu bụ na ejiri m oge m na-ejuputa karama m n'ihi na oge mbụ m gara bụ October na-ekpo ọkụ nke ukwuu. Rome si otú a nwere ihe dị ka isi iyi 60 dị ịrịba ama na ọtụtụ narị isi iyi ndị dị nta karị, n'ihi ya, n'ozuzu, ha gbakwụnye ihe ruru puku abụọ.
Onye kacha mara amara bụ Isi iyi Trevi onye yiri ka ọ na-anakọta banyere 3 puku euro kwa ụbọchị. Onye ọ bụla na-atụba mkpụrụ ego, ọ bụ omenala, n'ihi na dịka akụkọ akụkọ si kwuo, ọ bụrụ na ị tụfuo otu ị ga-alọghachi ileta. Ebee ka ego na-aga? na ọrụ ebere
N'aka nke ọzọ, e nwere okwu ochie n'ụwa nke na-aga "ụzọ niile na-eduga Rom". Okwu a sitere n'eziokwu na Rom bụ alaeze na Europe n'ihi ya, e nwere okporo ụzọ oge ochie nke jikọtara ya na ngalaba ya. Dịka ọmụmaatụ, ndị Site na Appia nke na-ejikọta Rome na Brindisei ma ọ bụ Site na Aurelia nke jikọtara ya na France. Ọ bụrụ na ihu igwe dị mma, ịgba ígwè n'okporo ụzọ Via Appia bụ njem mara mma.
Ị maara na Rome nwere pyramid? Ee, e nwere otu na ọ malitere na narị afọ nke XNUMX. Ọ bụ Cestius wuru ya, onye na-ere ahịa nke nwere ịhụnanya na omenala ndị Ijipt. Enwere ike ịhụ pyramid ahụ ma nwee ike iji ntuziaka gaa na ụbọchị ụfọdụ. Na tupu anyị aga, anyị enweghị ike ichefu Catacombs nke Rome Ha bụ ihe na-adọrọ mmasị, nke nwere ogologo ihe karịrị kilomita 20. Ndị Kraịst wuru ha ka ha lie ndị ha nwụrụ anwụ na taa enwere ike ileta ha.
Iji mechaa, ọ bụ ezie na n'ezie ọchịchọ ịmata ihe ndị ọzọ ga-anọgide na pipeline: Rome tọrọ Italy, Pantheon na-aga n'ihu na-eji ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ puku afọ abụọ. nwamba kpafuru akpafu nwere ikike pụrụicheee, ha nweere onwe ha kpamkpam, Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 90% nke obodo oge ochie ka gwupụtabeghịoh ma eleghị anya ọ gaghị abụ n'ihi na ọ dara n'okpuru ọkwa nke okporo ụzọ ugbu a na n'ikpeazụ, Rome bụ nanị obodo n'ụwa na o nwere n'ime ya obodo kwụụrụ onwe ya: Vatican.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Rome » Curiosities nke Rome
Nri a na-ahụkarị nke spain
Obodo kacha mma na Granada